Peach & Lily Wild Dew Treatment Essence လေးနဲ့ ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ မမေ့နဲ့နော်! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Peach & Lily Wild Dew Treatment Essence လေးနဲ့ ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ မမေ့နဲ့နော်!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ တော်တော်များများ အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက် မေ့လျော့နေတတ်တဲ့ Skin Care Product လေးနဲ့ အသားအရေအတွက်အရေးကြီးပုံကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Product ကတော့ Peach & Lily Wild Dew Treatment Essence လေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Product လေးကို မမိတ်ဆက်ပေးခင် အရင်ဆုံးအနေနဲ့ အသားအရေ ရေဓာတ်လျော့နည်းလာတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်လျော့နည်းခြင်းဟာ ဝက်ခြံတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ရန်အတွက် အားပေးသလို Sensitive Skin အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လျင်မြန်စွာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်လျော့နည်းတဲ့အသားအရေဟာ လန်းဆန်းမှုမရှိဘဲ စိုပြေချောမွေ့မှုလည်း မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အသားအရေ စိုပြေပြီး ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ အသားအရေဟာ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်။ အသားအရေ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေမှသာ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ ပိုမိုလှပစေမှာပါ။ ရေများများသောက်ခြင်းဟာ အသားအရေကို စိုပြေစေပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့ အစိုဓာတ်ကိုတော့ ပြည့်ဝစွာ မပေးနိုင်ပါဘူး။
အခု Peach & Lily Wild Dew Treatment Essence လေးမှာ Hyaluronic Acid ကို Short, Medium, Long Molecules တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ Hyaluronic Acid ဟာ ရေဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပြီး Short Molecules တွေဟာ အသားအရေအတွင်းဆုံးပိုင်းအထိ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ Medium Molecules နဲ့ Long Molecules တို့ဟာ မျက်နှာပြင်ရှိ အစိုဓာတ်ကို စုစည်းထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေ ယားယံခြင်းနဲ့ အမဲစက်တွေကို သက်သာစေနိုင်ဖို့ရန်အတွက် Niacinamide ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်စပ်ထားပါသေးတယ်။ Yeast Ferment ဟာ အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို ဟန့်တားပေးပြီး အာဟာရဓာတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ အဆီပြန်တတ်တဲ့ အသားအရေမှအစ Sensitive Skin အထိ အသားအရေတွင်းစိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့လေးကြောင့်လည်း အသုံးပြုတဲ့အခါ လန်းဆန်းမှုကို ခံစားရမှာပါ။ မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 100 ml တဗူးကို 39 $ ကျသင့်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက UK online Shop for Myanmar တို့မှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို Loreal Revitalift နဲ့ ဟန့်တားကြမယ်……
Tags: treatment essence